Ndị a bụ ndụmọdụ 5 iji soro ya na-emegharị, were nzọụkwụ mbụ - TELES RELAY
Ọ dịtụla kemgbe ị nwere anwụrụ na Instagram ma ị maghị otu esi ewere nzọụkwụ mbụ? Ndị a bụ ndụmọdụ 5 maka ịchụ nwoke na nwanyị!
Anyị agaghị agha ụgha n’etiti onwe anyị, ịchụ nwoke na ịchụ nwoke na ndụ n’ezie na-eyi egwu. O siri ike iwepụ onwe gị, ọkachasị mgbe ị na-atụ ụjọ ịnwụ n'oké ifufe ma ọ bụ ịbụ enyi enyi (e) n'ụdị. Mana n’oge soshal midia, ọ bụzị ihe a na-ahụkarị iji hụ ndị mmadụ na ịchụ nwanyị. E wezụga nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọọ ịrapara gị n'ihe Instagram, mara na ịnọ n’ebe kwesịrị ekwesị. Nchịkọta akụkọ nke Trendy ekpebiela ị kpuchie ụfọdụ obere ndụmọdụ iji tinye ihe ịga nke ọma n'ịchọpụta nwata nwoke na nwa agbọghọ na-eme ka ị gbazee kpamkpam Mee ngwa ngwa chọpụta atụmatụ 5 anyị na-adịghị agha agha!
Soro ya / ya na-amasị ya foto
Ebe E Si Nweta: Andrea Piacquadio site na Pexels
Ọ bụrụ na ịnwebeghị, soro nkpagbu gị Instagram. Nke a bụ isi ma ọ bụrụ na ịchọrọ igosi na ị nwere mmasị na ya. Ma anyị ekwesịghị ịkwụsị n’ebe ahụ. Egbula ịmasị foto ụfọdụ nke ibe ya, ka ị pụta na usoro iheomume nke ọkwa ya ma chọọ ya n'otu oge.. Agbanyeghị, zere ịpị ịpị foto karịrị atọ ma ọ bụ n'akwụkwọ ochie. Ihe kpatara ya ? Would ga-ewere ihe egwu nke ịbụ onye a ga-egwu ngwa ngwa ma ọ bụ bịa dịka onye na-enweghị olileanya. Lezie anya ịhọrọ ihe oyiyi ebe ọ ga - erite uru ya ka o wee ghọta na ị naghị enwe mmasị na amara ya.
Na-eri akụkọ gị iji dọta uche ya
Ebe E Si Nweta: Keira Burton site na Pexels
Jide n'aka na ị maara ihe na-amasị ya: njem, egwuregwu, foto, egwuregwu vidio, ụdị egwu ya / wdg. Site ebe ahụ, oge ụfọdụ kesaa ọdịnaya dabere na mmasị ha. Usoro a dị ntakịrị ihe na-efu, mana ọ nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ hụ na ị nwere ihe jikọrọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na nkọwa nke akụkọ gị na-adọrọ mmasị ya, ọ nwere ike iziga gị obere akwụkwọ na DMs gị. O doro anya, bụrụ aghụghọ ma ghara i copyomi agụụ gị. Ọ ga-adaba maka ụdị onye ị bụ na ọ bụghị nke ị chepụtara iji mee ya obi.
Ikwu banyere akwụkwọ ya
Il tue sa fiancée avec une « hache » quelques jours avant leur…
Ndị a bụ ọtụtụ ihe kpatara ịkwụsị mmekọrịta gị na mmekọahụ gị ...
Oge erugo ịmalite azụmahịa site na ịza ajụjụ na ọkwa gị! N'ezie, agwala ya mmetụta gị kpọmkwem ma gaa crescendo. Mgbe ị na-emeghachi omume na foto ha, mgbe ahụ ị nwere ike ịja ha mma maka ọdịdị ha, na ndepụta ha na ọbụna ịkwa ha emo.. Iji maa atụ, na-enwere ya anyaụfụ mgbe ọ na-aga anyanwụ n’adịghị ka gị ka na-arụ ọrụ na mmiri ozuzo. Emegbula emojis ma ị nwere ike iji ụfọdụ dịka smirk, ire ọkụ, wink ma ọ bụ imp. N'otu oge, ị nwekwara ike ịkpado ya / ya na memes na-akpa ọchị. Meela ya n'ezie n'ezie!
Denye foto gi kacha mma
Ebe E Si Nweta: Cottonbro site na Pexels
Mee ibe gi Instagram Ọ na-atọ ụtọ ileta. Banyere selfies gị, biputere ndị na-egosi gị n'ụzọ zuru oke. Nke a bụ ohere iji gosipụta gị mma ihu mgbe ị na-eteta ma ọ bụ gị mma ezumike tan. You nwere ike ịhọrọ nzacha ma na-amasịkarị ihe okike. Zere ikenye foto nke onwe gị iji kọwaa onwe gị n'akụkọ mgbe ochie. Ọ naghị adị mfe mgbe nile inwe obi ike nke onwe, mana onye nwere ntụkwasị obi na-adọrọ adọrọ ma na-adọta. Ọzọkwa, ejila naanị foto foto gị rijuo nri gị, n’enweghi ike ịnụ ụda narcissistic. Ọzọkwa ịkọrọ ndụ gị kwa ụbọchị na gị onwe gị agụụ mmekọahụ, gị anwụrụ ga-amụtakwu banyere gị na-ekele gị maka onye ị bụ.
Meghachi omume na akụkọ gị
Ebe E Si Nweta: Cristian Dina site na Pexels
Maka usoro ikpeazụ a, ị ga-amalite ma meghachi omume na akụkọ ya mana naanị site n'oge ruo n'oge iji zere ịpụta ka ndị riri ahụ. Omume gị ga-egosi ya na ị nwere mmasị n'ebe ọ nọ na ihe ọ na-eme kwa ụbọchị. Enweghị nsogbu, lekwasị anya na ọkụ mgbe ị zigara ya ozi. Ọ bụrụ na ọ / ya masịrị gị, ihe niile ga-adị ka klọọkụ, ị gaghị amanyekwa ihe n’etiti gị. Ihu ọma, dị ka onwe gị ma tụkwasị onwe gị obi. Nwere kaadị niile n'aka gị ugbu a iji mebie gị. O di nwute, oburu na ya adighi anabata ihe (-ve) na igba gi, ekwesila ikwusi ma gaa n'ihu. Jisie ike !
Atụmatụ 5kụrụ na; na-anwa iduhienzọụkwụ mbụ